बिदेशी मुद्राको बिनिमयदरः आज मंगलबारको दिन बढ्यो कि घट्यो विदेशी मुद्राको भाउ….. – SUDUR MEDIA
बिदेशी मुद्राको बिनिमयदरः आज मंगलबारको दिन बढ्यो कि घट्यो विदेशी मुद्राको भाउ…..
August 3, 2021 AdminLeaveaComment on बिदेशी मुद्राको बिनिमयदरः आज मंगलबारको दिन बढ्यो कि घट्यो विदेशी मुद्राको भाउ…..
आज मंगलबारको दिन बढ्यो कि घट्यो विदेशी मुद्राको भाउ ? नेपाल राष्ट्र बैंकले आज मंगलबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर तोकेको छ । आजको विनिमयदर अनुसार सोमबारको तुलनामा धेरै देशका मुद्राको भाउ ओरालो लागेको छ । राष्ट्र आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर ११८ रुपैयाँ ६५ पैसा र बिक्रीदर ११९ रुपैयाँ २५ पैसा रहेको छ ।
यूरोपियन युरो एकको खरिददर १४१ रुपैयाँ ५ पैसा र बिक्रीदर १४१ रुपैयाँ ७८ पैसा रहेको छ। यूके पाउण्ड एकको खरिददर १६४ रुपैयाँ ९४ पैसा र बिक्रीदर १६५ रुपैयाँ ७७ पैसा रहेको छ ।
साउदी रियाल एकको खरिददर ३१ रुपैयाँ ६४ पैसा बिक्रीदर ३१ रुपैयाँ ८० पैसा तोकेको छ । कतारी रियाल एकको खरिददर ३२ रुपैयाँ ५ पैसा र बिक्रीदर ३२ रुपैयाँ २१ पैसा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यस्तैगरी, यूएइ दिराम एकको खरिददर ३२ रुपैयाँ ३० पैसा तथा बिक्रीदर ३२ रुपैयाँ ४७ पैसा रहेको छ । मलेसियन रिंगिट एकको खरिददर २८ रुपैयाँ ८ पैसा तथा बिक्रीदर २८ रुपैयाँ २२ पैसा रहेको छ ।
कुवेती दिनार एकको खरिददर ३९४ रुपैयाँ ८९ पैसा तथा बिक्रीदर ३९६ रुपैयाँ ८९ पैसा रहेको छ । बहराइन दिनार एकको खरिददर ३१४ रुपैयाँ ७३ पैसा तथा बिक्रीदर ३१६ रुपैयाँ ३२ पैसा रहेको छ ।
यो पनि हेर्नुहोस्ः आज सुनचाँदीको भाउ कति छ ? हेर्नुहोस् प्रति तोला कतिमा कारोबार हुँदैछसाताको तेस्रो दिन अर्थात आज मंगलबारको दिन नेपाली बजारमा सुनको भाउ स्थिर छ । हिंजो सोमबार प्रतितोला १ सय रुपैयाँले घटेको सुनको भाउ आज भने स्थिर रहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
महासंघका अनुसार आज छापावाल सुन प्रतितोला ९२ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । छापावाल सुन हिजो सोमबार पनि यही मूल्यमा कारोबार भएको थियो । त्यस्तै आज तेजावी सुन प्रतितोला ९१ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । तेजावी सुन हिजो पनि यही मूल्यमा कारोबार भएको थियो ।
यस्तै आज चाँदीको भाउ भने घटेको छ । आज चाँदी प्रतितोला १२ सय ७५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । चाँदी हिजो भने प्रतितोला १२ सय ८५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । लामो समयको कोरोना महामारी र लकडाउनसँगै ह्वात्तै बढेको सुन चाँदीको मूल्यमा पछिल्लो समय केही घट्बढ हुने गरेको छ ।
आज सुनचाँदीको भाउ कति छ ? हेर्नुहोस् प्रति तोला कतिमा कारोबार हुँदैछ……
काठमाडौं उपत्यकामा एक साता थपियो निषेधाज्ञा, के खुल्ने, के नखुल्ने ? हेर्नुहोस् (सूची सहित)…..
आज सुनको मूल्य स्थिर, महिनाभर सुनको भाउ तोलामा ४,६०० रुपैयाँले गिरावट…..
२३ वर्षीय मोडल निशा घिमिरेको द’र्दनाक अवस्था ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)
अन्माएर गाडीमा चढीसकेकी बेहुली अंकललाई अंगालो हालेर बेहुलाको घर नजाने भन्दै नछोडेपछी भिडियो भयो भाइरल ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)